Global Voices teny Malagasy » Buzzfeed kirghizy miteraka fitarainana (sy fijery) momba ny fitsaràna an-tendro mifototra amin’ny maha-lahy sy vavy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Desambra 2019 5:07 GMT 1	 · Mpanoratra Akhal-Tech Collective Nandika (ru) i Фарида Куттыходжаева, Miriam Palisson, Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kyrgyzstan, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina
Tamin'ity herinandro ity, taorian'ny namoahany lahatsoratra iray nitondra lohateny hoe “ireo hatsaràna fototra miisa 32 tokony hananan'ny ‘kelin‘ idealy  (fofombady vavy), norarafan'ny fanehoankevitra maneho tsy hafaliana ilay vavahadin-tserasera kirghizy iray natao ho an'ny fampahalalambaovao sy ny fialamboly, izay manangona ireo votoaty azo lazaina ho miely be. Rehefa avy norarafan'ireo fiampangàna marobe nalefan'ireo mpamaky nilaza azy ho mpanavakavaka, novalian'ny Limon.kg tamin'ity lahatsoratra manaraka ity: « ireo hatsaràna fototra miisa 32 tokony hananan'ny “kouïo bala” idealy [fofombady lahy]».
Saika ny zavatra rehetra no sahanin'ny kelin, izany no manazava ny antony ankasitrahana ireo fomba fanao ao amin'ilay firenena, toy ny fakàna ankery vehivavy hovadiana  .
Araka ny lazain'ny Eurasianet  [teny anglisy]:
Raiso ho ohatra ny toerana lalaovin'i Saïda Rametova ao anatin'ilay hatsikana Ozbeky malaza “Super kelinchak”. Avadiny ho toy ny helo ny fiainan'ilay Rosiàna vinantovaviny, amin'ny fanakianana tsy misy farany izay rehetra tsy fahaizany mikarakara legioma sy izay ataony eo am-panatanterahana ireo raharaha hafa ao an-tokantrano. Na koa ny toerana tazonin’i Turakhan Sadykova  [anglisy] ao anatin'ilay sarimihetsika vokatra tany Caucasus, “Kelin” voafaritra  [teny anglisy] ao anaty kiana iray ho toy ny “vehivavy antitra mpamosavy manana fifandraisana miafina amin'ny natiora”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/12/08/145487/
 ireo hatsaràna fototra miisa 32 tokony hananan'ny ‘kelin‘ idealy: http://limon.kg/news:67518
 ireo hatsaràna fototra miisa 32 tokony hananan'ny “kouïo bala” idealy : http://limon.kg/news:67543/
 ny fakàna ankery vehivavy hovadiana: https://ru.globalvoices.org/2012/06/07/14897/
 i Turakhan Sadykova: http://www.imdb.com/name/nm2627213/?ref_=tt_cl_t2